ICT.com.mm မှာ Camera အသားပေးဖုန်းတွေထဲက အသစ်ထွက်လာတဲ့ Oppo Reno5ဖုန်းတွေကို Pre-order မှာယူနိုင်ပါပြီ ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှာ Camera အသားပေးဖုန်းတွေထဲက အသစ်ထွက်လာတဲ့ Oppo Reno5ဖုန်းတွေကို Pre-order မှာယူနိုင်ပါပြီ
Oppo Reno5ဖုန်းမှာဆိုရင် ထူးခြားချက်က…
AI Mixed Portrait ပါတာကြောင့် ပုံရိပ်နှင့် နောက်ခံဗီဒီယိုကို လိုက်ဖက်ညီအောင် ရောနှော၍ အနုပညာမြောက်လက်ရာတွေ ဖန်တီးနိုင်မယ်။
မိမိရိုက်ကူးသော ပုံရိပ်နှင့်နောက်ခံ မြင်ကွင်းနှစ်ဖက်လုံး၏ လှုပ်ရှားမှုတွေကို တပြိုင်နက် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Dual-view Video ပါဝင်လာပါတယ်။
အလင်းမှိန်မှိန်နဲ့ရိုက်မလား? အနောက်ဘက်ကနေ မီးထိုးထားသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေရိုက်မလား? ဗီဒီယိုများကို ထင်ရှားတောက်ပစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးပြီးနောက် Soloop တွင် တည်းဖြတ်ခြင်းကို နှိပ်ပေးရုံဖြင့် Soloop မှ ဗီဒီယိုများအား ပြီးပြည့်စုံမှုရှိအောင် အလိုအလျောက်တည်းဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ influencer များ ရိုက်ကူးသော ဗီဒီယိုများကဲ့သို့ပင် မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိနေနိုင်ဦးမှာနော်။
50W Flash Charge ကြောင့် (၅)မိနစ်ပဲ အချိန်ရရင်တောင် (၃)နာရီကြာ အားကြာရှည်ခံပြီးအသုံးပြုနိုင်ဦးမှာနော်။
camera configuration တွေကတော့ 64MP Main Camera ၊ 8MP Ultrawide Camera ၊ 2MP Macro Camera နဲ့ 2MP Depth Sensing Camera တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီလိုအရည်အသွေးကောင်းတွေရှိတဲ့ Oppo Reno5ဖုန်းတွေမှာ Starry Black နဲ့ Fantasy Silver ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာနှစ်ရောင်ရှိပါတယ်။
ကဲ ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ဗီဒိုယိုရိုက် ဝါသနာပါတဲ့ ကိုကို၊ မမတို့ရေ…
Oppo Reno5ကို K499,900 နဲ့ မနက်ဖြန် (21.1.21) နောက်ဆုံးထားပြီး Pre-order မှာယူမယ်ဆိုရင် (23.1.21) မှာ ပစ္စည်းရမှာနော်
ဒါတင်မကသေးဘဲ Pre-order မှာယူတဲ့ မည်သူ့ကိုမဆို MAMBO Smart Band တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ မြန်မြန်သာ Order လာတင်လိုက်တော့နော်…
Oppo Reno5Starry Black (8GB/128GB)
Shop here: http://bit.ly/35ZNB8e
Oppo Reno5Fantasy Silver (8GB/128GB)
Shop here: http://bit.ly/38Zmpbu
Newer လူပုံတွေကို ကာတွန်းပုံပြောင်းချင်သူတွေအတွက် ToonApp ဆိုတဲ့ app လေး တစ်ခုရှိပါတယ်
Older ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရသူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေထည့်သွင်းထားသင့်တာကတော့ Anti-virus ပါ